चीन XYS नि: शुल्क धुलो मोबाइल ड्राई ग्राइन्डर (मानक) निर्माता र आपूर्तिकर्ता झिय्यानशी
XYS नि: शुल्क धुलो मोबाइल ड्राई ग्राइन्डर (मानक)
प्रणाली कार्यस्थलमा लचिलो काम गर्न सक्दछ। सम्पूर्ण उपकरण प्रणाली धूलो भ्याकुम क्लीनरमा केन्द्रित छ - जुन प्रसिद्ध अग्रणी यूरोपीय ब्रान्डमा अपनाईन्छ। तपाईं क्लिनरमा उपकरणहरू राख्न सक्नुहुनेछ, जस्तै स्यान्डपेपर, स्यान्डरहरू र अन्य सामग्रीहरू।
यो दुबै इलेक्ट्रिक अपरेटिंग ग्राइन्डिंग र एयर-अपरेटिंग ग्राइन्डिंग पोर्ट, विकल्पको लागि विभिन्न एयर / इलेक्ट्रिक स्यान्डरहरूसँग सुसज्जित छ।
हाम्रो उत्पादनले पेशेवर धुलो एक्स्ट्रक्टरको प्रयोग गरी पलिशमा फाइदा लिन्छ, जसले सुफ्ट स्मूथ र बिर्गेटर बनाउन सक्छ। उदाहरण को लागी, जब धूलो एक्स्ट्रक्टर काम गर्दछ, कार स्वच्छ र सुरक्षित वातावरण मा छ। यसले डेन्टेड कार बडीलाई मर्मत गर्न सक्छ, जसले क्षतिग्रस्त कारलाई पोलिश गर्न र स्प्रे गर्न सक्छ र बिग्रिएको शरीरलाई नयाँ जत्तिकै चिल्लो बनाउँदछ।
१. सुव्यवस्थित, पेशेवर डिजाइन, अपरेशनको समयमा सहज चाल, प्रयोग गर्न बढी सुविधाजनक
२.इम्पेयर गरिएको व्यावसायिक भ्याकुम मोटर, स्थिर र टिकाऊ बुद्धिमान स्वत: .c. कन्ट्रोल इकाई, कार्य स्थिति स्क्रीनमा प्रदर्शन गर्न सकिन्छ, र प्रदर्शन स्थिर छ।
Class. कक्षा एल धूलोको लागि उपयुक्त
Tr. बलियो निकासी क्षमता र कम धुलो प्रदूषण
मार्बल टेराझो भिजा ड्राई ग्राइन्डर स्टोन फिक्सिंग ग्लोस पॉलिशिंग मोबाइल कc्क्रीट मेसिन, ग्राइन्डिंग चौड़ाई mm०० मीमी, ग्रहको गियर संरचना श्रृ among्खला श्रृंखला बीचको सबैभन्दा सानो आकार हो। प्लानेट्री प्लेटहरू विभिन्न दिशामा घुम्छन्, जसले कामको प्रदर्शन बढाउँदछ।
प्रणालीले दुई कामदारहरूलाई एकै समयमा काम गर्न अनुमति दिन्छ।
मुख्यतया पाना धातु वर्कशप र रंग हटाउने पेन्टमा प्रयोग गरियो, प्रारम्भिक फेदर किनारा पिसाई।
अघिल्लो: भिजेको र सुख्खा घर्षण पॉलिशिंग स्यान्डपेपर स्यान्डि She पानाहरू
अर्को: डिस्पोजेबल पेन्टिंग गन कप
XYS नि: शुल्क धुलो मोबाइल ड्राई ग्राइन्डर (आर्थिक)